Ringa peji rino
Maperembudzi, ayo anozivikanwawo nokuti Hansen's disease (HD), utachiona hwenguva yakareba hunokonzerwa nebhakiteria Mycobacterium leprae uye Mycobacterium lepromatosis. Pakutanga, hapana zviratidzo zveutachiona uye izvi zvinowanzoramba zvakadaro kwemakore 5 kusvika 20. Zviratidzo zvinozobuda zvinosanganisira kubumba munzvimbo dzemanevhi, munofamba nemhepo yokufema, muganda, uye mumaziso. Izvi zvinogona kuguma munhu asisanzwe kurwadziwa zvoita kuti arasikirwe nemicheto yemuviri pamusana pekuramba achikuvara kana kukanganiswa neutachiona asi iye asinganzwi kuti ava nemaronda. Zvinogona kuitikawo kuti munhu ashaye simba kana kutadza kuona zvakanaka.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Maperembudzi&oldid=47233"
Last edited on 7 Gumiguru 2016, at 08:20